सर्वोच्चको फैसलापछि सांसद किनबेच गर्न ‘पावर ब्रोकर’को मास्टर प्लान ! « Gajureal
प्रकाशित मिति: १२ फाल्गुन २०७७, बुधबार १२:१२
संसद विघटनको बा-प्रयासलाई हजुरबा अदालतले लात हानेपछि बात अर्कैतिर पुगेको छ । अब प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजिनामा नदिए खेल अनैतिकताका आधारमा अघि बढ्नेछ । सत्तामा टिकि रहने, नढाली नछोड्ने र मौकामा चौका हान्ने – यी तीन तत्वहरु बीच फेरी खरिदबिक्रीको रेस्लिङ्ग चल्ने खतरा छ ।
सरकार लडाउन र टिकाउन सांसद किन्ने र बेच्ने कार्यले तिब्रता पाउनेछ । नेता खरिद तथा बिक्रीको मार्केट गुल्जार हुनेछ । जन्तिपनि हुने योग्यता नभएकालाई मन्त्री पड्काउने यो उत्तम अवसर हो । मन्त्री नभएपनि चुनाव खर्च उठाउने सर्वोत्तम समय हो । यसका लागि पार्टीका सीइओहरुसँग डाईरेक्ट ‘डील’ गर्नु आफुले आफैंलाई हलाल गर्नु हो । शक्तिका दलाल मार्फत् किनबेच हुनु मालामाल मालामाल हुनु हो ।
जनताको अभिमतलाई खरिद बिक्री गर्न ईच्छुक माननीय सांसद तथा नेताहरुलाई ‘पावर ब्रोकर एसोसियसन, नेपाल’ मौकाको फाईदा उठाउन हार्दिक आह्वान गर्दछ । ‘पावर ब्रोकरिङ’मा हाम्रो तिसबर्षे अनुभव भन्छ- काङ्ग्रेस होउन् वा कम्युनिस्ट, राजावादी होउन् वा मधेशवादी – हामी हरेकलाई उचित मूल्य र अवमुल्यमा किन्न र बेच्न सक्छौं ।
माननीयको विनिमय दर
पद खरिद दर बिक्री दर कैफियत
सांसद– प्रतिनिधि सभा रु. ५० लाख मात्र रु. ५० लाख १ हजार मात्र गुटै लिनेलाई छुट
सांसद – राष्ट्रिय सभा रु. २० लाख मात्र रु. २० लाख ९०० मात्र व्यापारीलाई विशेष
समानुपातिक रु. ३५ लाख मात्र रु. ३५ लाख ४ सय मात्र नो बार्गेनिङ्ग
स्वतन्त्र रु. ४५ लाख मात्र रु. ४५ लाख ७ हजार मात्र मंत्री बन्ने पक्का
नेता – संसदीय दल रु. ६० लाख मात्र रु. ६० लाख ५ रुपैंयाँ मात्र कमिसनको व्यवस्था
उपनेता – संसदीय दल रु. १५ लाख मात्र रु. १५ लाख ३०० मात्र कमिसन छैन
सचेतक रु. १० लाख मात्र रु. १० लाख ५ हजार मात्र फिप्टी फिप्टी
(नोट : सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष्य, गुट प्रमुख र उप प्रमुखका सन्दर्भमा डलर तथा युरो नोटमा लेनदेन हुनेछ । साथै उच्च गोपनियता कायम गरिनेछ ।)
-होटेलमा बस्नु परेमा २०% सेवाशुल्क लाग्नेछ ।
-बिक्री भईसकेका सांसद फिर्ता हुने छैनन् ।
-अपहरित सांसद किनबेचको डबल चार्ज लाग्नेछ ।
-राम-रमाईलो गर्नु गराउनु परेमा माथीको लागत थाई भाटमा लिईनेछ ।
(पुनश्च : कृपया चित्रबहादुर र चित्रबहादुर जस्ता बिचित्रबहादुरहरुले कष्ट नगर्नुहोला !)
पोलिटिकल पावर-ब्रोकर एसोसिएसन, नेपाल
(Picture : Social Media)